Caafimaadkaada – helitaanka dhaqtarka | Southampton New Communities
Baaritaanada caadiga ah
Dhibaatooyinka caadiga ah ee caafimaadka, u tag dhaqtarkaada degaanka. Ha aadin isbitaalka. Magaca kale ee loo yaqaan dhaqaatiirta wadankaan UK waa Dhaqtar Guud ama GB, haddii aad jirato, waa inaad marka hore u tagtaa GB-gaada. Degdegta
Haddii aad u baahato caawinaad laakiin aanay xaaladaadu ahayn mid qatar ku ah naftaada markaas Xarumaha socodka lagu tago ayaa ku fiican. Xarumahaas socodku waxay kaa caawin karaan:-
Infekshanka Lafaha jabay
Jirooyinka yar yar
Ka hor taga Uurka Shubanka iyo Mataga
Kufitaanka iyo dhicitaanka
Kaliya tag isbitaalka haddii ay xaaladaadu qatar ku jirto. Qeybta Shilalka iyo Qatarta (A&E) ee isbitaalku waxay howlaha degdegta u qabtaa dadka ay jirooyinka qatarta ahi hayaan ama dhaawac korka ahi uu soo gaaray. A&E waxay kaa caawin karaan:
Suuxida ama qalalka
Isku buuq dhaqso ah ee aad ka u daran
Shil qatar ah
Dhibaato xaga neefsashada ah oo xun
Dhiig bax fara badan
Diiditaan allergig ah oo qatara
Qalal la tuhmo
Shaqaalaha qeybta A&E waxaa qasab ku ah inay marka hore muhiimada siiiyaan daaweeyaan dadka sida aadka ah u xanuunsan oo noloshoodu qatarta ku jirto, marka haddii aad halkaas tagto oo jiradaadu ay yar tahay, waxaa laga yaaba inaad sugto intii muddo ah si u dhaqtar ku arko. Haddii aadan ku hadlin luqada Ingriiska, waxaad xaq u leedahay inaad hesho turjibaan. Haddii uusan dhaawacaadu ahayn mid qatar ah, u tag xarumaha socodka ama meelaha jirooyinka yar yar. Uma aad baahnid balan si aad dhaqtar u aragto. Waxaana maamula koox kalkaalisooyin aqoon sare leh ah oo aqoon fiican u leh daaweeynta cudurada yar yar. Qeybta dhaawacyada yar yar ama xarumaha socodka lagu tagaa waxay furan yihiin sanadka oo dhan 365 maalmoodba oo waxay bixiyaan daaweeynta dhaawacyada aan aadka qatarta u ahayn, sida murgacashada, nabarada yar yar. Dad fara badan ayaa waxay u taqaan dhaawac yar yar qeybta A&E, iyagoo aan ogayn in si sahaln loogu daaweyn karo qeybta dhaawacyada yar yar ama xarumaha socodka lagu tago. Xiriirinta
Xarumaha Socodka lagu tago ee Southampton waxaa laga heli karaa Xarunta Caafimaadka ee Bitterne iyo Isbitaalka RSH. Wixii warbixin dheeraad ah ee kale isticmaal bogaan hoose.
Urgent Care on Southampton Community Healthcare website
Dhibaatoyinka kale u tag dhaqtarkaada. Qof kasta oo ku nool UK waxa uu xaq u leeyahay inuu iska diiwaangeliyo dhaqtar.
La xariir dhaqtarkaada markii aad dhibaato caafimaad qabto ama aad xanuunsan tahay oo balan ka sameeyso. Dhaqtarkaada degaanka ama GB-gaadu waxa uu bixiyaa howlo fara badan oo la xariira caafimaadka qoyska, oo ay ku jiraan: Talo bixinta dhibaatooyinka caafimaadka oo ay ku jiraan caafimaadka galmada
Talooyinka la xariirka iska ilaalinta uurka iyo uurkaba.
Baaritaanka iyo daaweeynta
U qoritaanka daawada
U diritaanka dhaqaatiirta kale ee caafimaadka iyo howlaha bulshada.
Haddii ay xaaladaadu tahay mid aan qatar ahayn, waxaad filan kartaa inaad dhaqtarkaad ku aragto labo casho gudahood ama kalkaaliso caafimaad hal maalin gudaheed. Haddii aadan u baahnayn balan labo casho gudaheeda, waxaad sidoo kale dhigan kartaa balan waqti kale ah oo ku sahlan. Waa mid muhiim ah inaad ilaaliso balamadaada, ama aad u soo shegto dhaqtarka haddii aadan iman karin ama aad doonayso inaad waqtiga badasho. Helitaanka Dhaqtarka
Haddii aadan horay ugu qornay dhaqtar GB-ah ama aad doonayso inaad mid ka hesho meesha aad degan tahay, waxaad ka raadin kartaa bogeena ah GPs in Southampton page.
Wixii ka baxasan saacadaha uu GB-gaadu furan yahay waxaad heli kartaa dhaqtarka saacadaha shaqada ka baxsan. howshaan waa in loo isticmaalaa kaliya dhibaatooyinka caafimaad ee degdegta ah ee aan la sugi karin inta GB-ga mar labaad laga furayo. Howshaani waxba kama qabato daawo qorida joogtada. Wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan goorta ay fiican tahay in la waco saacadaha shaqada ka dib, fadlan riix bogaan oo aqri. Waxaad ka wici kartaa howshaas nambarka ah 0844 811 3060.
Waa inaad wacdaa 999 xaaladaha caafimaad ee qatarta ah o kaliya
GPs in Southampton Nicholstown Surgery
Talooyinka caafimaadka ilkaha, iyo balan ka dhigashada dentist-tayaasha Hampshire, soo booqo Hampshire Dental Helpline.
Markii uu dhaqtarkaadu daawo ku qoro, caadi ahaan waxaad u tagtaa Farmashiyaha ama Chemist-ha. Farmashiyuhu markaa waxa uu ku siinayaa daawada saxdaa isagoo ku saleeynaya daawada uu dhaqtarku ku soo qoray. Sidoo kale bixinta daawada mooyaane, farmashiistayaashu waxay kaloo qabtaan howlo kale. Tusaale ahaan:
Talooyinka jirooyinka yar yar sida hergabka, dhibaatooyinka maqaarka iyo alleerjiga. Ka hortaga Uurka degdegta ah, Waxaad kaloo ka soo iibsan kartaa daawooyinka hergabka iyo iska ilaalinta xanuunka farmashiyaha. Bogaga
NHS Tooska ah
Waxaad ka heli kartaa talooyinka dhaqaatiirta NHS Direct – 0845 46 47. NHS Direct waa howlaha qadka telefoonka oo diyaar ku ah 24-ka saac ee maalintii, 365 casho ee sanadka si ay u siiyaan talooyinka caafimaadka la xariira, warbixino iyo dhiirigelin qof kasta oo doonaya. NHS Direct waxay kaloo bixiyaan warbixino qiimo leh iyo talooyinka xanaanada nafsiga ah oo ay internetka ku bixiyaan ah NHS Direct website.
Bogaga la isitcmaali karo
NHS Direct Health and symptom checkers